I-Focagreria Testagrossa - iPanelle neParkfood Palermo
Vula: Isonto lonke
Ukuvula: Uhlelo oluqhubekayo
Ukunambitheka nobuhle bePalermitan nsuku zonke, usuku lonke
4.7 /5 amavoti (amavoti angama-27)
I-Focagreria Testagrossa, kuCorso Calatafimi 91, ungaphezulu kwe Ukudla Kwasemgwaqweni a Palermo! Focacce, Panelle, Sandwiches nge Spleen, Crocchè nezinye eziningi ezihlwabusayo Ubuchule be-Palermitan.
Ukudla Kwasemgwaqweni I-Focagreria Testagrossa ePalermo - Hhayi kuphela iPanelle!
Ikhanda elikhulu, a Palermo, kunjalo I-Focacceria of ubuhle obukhiqizwayo nsuku zonke futhi iphunga Amabhomu. Ngaphezu kwalokho, I-Focagreria Testagrossa inikeza imenyu ehlukahlukene nenothile ye Ubuchule be-Palermitan: IPanelle, amaSandwich namaSpleen, eCrocchè nokunye okuningi okumangazayo uPalermo nezivakashi nsuku zonke ngokuqhuma kokunambitheka kweqiniso kweSisilia! Lo Ukudla Kwasemgwaqweni ubuhle obuhle a Palermo è I-Focagreria Testagrossa con Ukugxila, amaSandwich ngeSpleen, iCroccè nePanelle Palermitane engavunyelwe.
Ubuchule be-Palermitan I-Focagreria Testagrossa ePalermo - Amasemishi ngeSpleen
I-Focagreria Testagrossa, a Palermo, iyona ipngekhefu lesidlo sasemini noma ikhefu elihlwabusayo. Ukukhetha okubanzi onakho okusukela kwezithako namalungiselelo, okulungele ukwanelisa konke ukunambitheka nezidingo zamakhasimende ayo, athembekile nodlulayo. Focacce, Panelle, Sandwiches nge Spleen, Crocchè nezinye eziningi ezihlwabusayo Ubuchule be-Palermitan zilungiselelwe ngenhloso yokwenelisa amakhasimende, ngokuhlonipha ikhwalithi. Hhayi kuphela Ukudla Kwasemgwaqweni, I-Focagreria Testagrossa a Palermo okunikezwayo kumakhasimende IPanelle, amaSandwich namaSpleen, eCrocchè nabanye abaningi Ubuchule be-Palermitan kumele uzame!
I-Focagreria Testagrossa - IOkuhamba phambili ePalermo ngokuya ngokudla komgwaqo!
Da Ukudla Kwasemgwaqweni I-Focagreria Testagrossa, a Palermo, IPanelle, amaSandwich namaSpleen, eCrocchè nabanye abaningi Ubuchule be-Palermitan zenzelwe ukwanelisa lonke ulwelwesi futhi zikunikeze izikhathi ezincane zokunambitha kulo lonke ikhefu losuku lwakho. Ukudla Kwasemgwaqweni I-Focagreria Testagrossa, a Palermo, kungukuhle futhi kuthokozise futhi kube nezixazululo ezimnandi nganoma isiphi isikhathi sosuku futhi kumelela lonke idolobha indlela emnandi futhi eqotho kuko konke ukudla kosuku. Vula usuku lonke, zonke izinsuku, I-Focagreria Testagrossa, a Palermo, imelela okuhle kwenhloko-dolobha yaseSicily Ukudla Kwasemgwaqweni ngezixazululo zokuthakazelela ukudla ezilungele ihora ngalinye! Zama Amabhomu of flavour ahlukahlukene, ingasaphathwa ejwayelekile Spawen isangweji, isizinda esivela kuPalermo, delle ingwenya kanye ne IPanelle ohahayo.
Ubuchule be-Palermitan I-Focagreria Testagrossa ePalermo - Ukunambitheka okuyiqiniso kweSicily
I-Focagreria Testagrossa, a Palermo, konke okuhle kakhulu Ukudla Kwasemgwaqweni sibonga ubuhle besiko likaPalermo njengo Focacce, Panelle, Sandwiches nge Spleen and Crocchè; konke kuhlale kulungiselelwe nge imikhiqizo emisha njalo nekhwalithi. Okokudla kwasemini, isidlo sakusihlwa, ngesidlo esimnandi esimnandi usuku lonke ... I-Focagreria Testagrossa bekulokhu kuyisinqumo esihle kakhulu kubathandi be-Taste kanye ne-Sicilian Siko. Hhayi ama-Palermitans kuphela, kodwa nabavakashi abavakashela Palermo bayazi ikhwalithi nobuhle be Ubuchule be-Palermitan okulungiselelwe nsuku zonke I-Focagreria Testagrossa. Iqiniso Ukudla Kwasemgwaqweni a Palermo? FTestagrossa ocacceria: Focacce, Panelle, Sandwiches nge Spleen, Crocchè nezinye izinto eziningi ezifisa amakhono kaPalermitan, nsuku zonke, usuku lonke!
Ikheli: UCorso Calatafimi, 91
Ucingo: 091 426777
Umakhala ekhukhwini: 392 0525747
Umakhala ekhukhwini: 320 3176388
Inombolo ye-VAT: 06307050820
7 izinyanga edlule
Testagrossa ..... izindlebe ezincane ???
Yendawo yemikhiqizo ejwayelekile yaseSisilia. Amanani amahle nabasebenzi abahle kakhulu. Impela ukuthi ume. I-panelle mihle kakhulu. Ngiyabonga Davide